प्रचण्ड कहिले आउँछन् नेपाल, श्रीमती सीता दाहाललाई भएको के हो ? – Medianp
प्रचण्ड कहिले आउँछन् नेपाल, श्रीमती सीता दाहाललाई भएको के हो ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, असार १२, २०७५१३:३८0
काठमाडौं, १२ असार । विगत नौ दिनदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सञ्चारमाध्यममा कतै देखिएका छैनन् । पत्नी सीता दाहाललाई उपचारका लागि असार ४ गते उनी सिंगापुर प्रस्थान गरेका थिए । त्यसयता सिंगापुरमा प्रचण्ड के गर्दैछन्, सीताको उपचार कस्तो भइरहेको छ ? भन्ने विषयमा कतै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा निस्कनु अघिल्लो दिन नै प्रचण्ड सिंगापुर उडेका थिए । यतिखेर उनी पत्नी सीताको उपचारमा आफैं खटिएका छन् । सीतामा उच्च रक्तचाप, मधुमेह र कोलेस्ट्रोललगायतका समस्या देखिएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार सीतालाई चिकित्सकहरूले फिजियोथेरापीमार्फत उपचार गराइरहेका छन् ।
अझै केही दिनसम्म सीताको फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने भएकाले प्रचण्ड एक साता सिंगापुरमै रहने बुझिएको छ । उनकी कान्छी छोरी गंगा भने आमा र बुबालाई सिंगापुर छाडेर सोमबार काठमाडौं फर्किएकी छन् । पुत्र प्रकाशको निधनपछि सीता निकै गल्दै गएपछि प्रचण्डले सिंगापुरमा उपचार गराउने निर्णय गरेका हुन् । प्रकाशको निधनपछि सीता टोलाइरहने, एकोहोरिँदै गएको पारिवारिक स्रोतले बतायो । चार दशकभन्दा बढी समय सँगै रहेका प्रचण्डले पहिलोपटक पत्नीको उपचारमा राजनीति छाडेर यसरी उपचार गराइरहेका हुन् ।
‘फन्ने खान’ को नयाँ पोस्टर रिलिज, अनिल कपुर र ऐश्वर्या राय फेरि एकसाथ
छिमेकी र चिनजानकै व्यक्तिबाट बलात्कार हुने क्रम बढ्दो ! आखिर यो समाज कता जाँदै छ ?